DEG DEG+SAWIRRO: Dawladda Puntland oo gacanta ku dhigtay Kaararkii Cod-bixinta S/land ee G Sanaag | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL DEG DEG+SAWIRRO: Dawladda Puntland oo gacanta ku dhigtay Kaararkii Cod-bixinta S/land ee G Sanaag – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha DEG DEG+SAWIRRO: Dawladda Puntland oo gacanta ku dhigtay Kaararkii Cod-bixinta S/land ee G Sanaag
BARAN(P-TIMES) – Dawladda Puntland ayaa gacanta ku soo dhigtay in ka badan 200 oo ah kaararka Cod-bixinta Somaliland oo la doonayey in looga codeeyo deegaano ay kamid yihiin Xiingalool iyo degmada Baran ee gobalka Sanaag.
Wafdi ka socda dawladda Puntland ayaa booqday inta badan degmooyinka gobalka Sanaag, waxayna dadweynaha kala hadleen xaaladdaha nabadgalyadda iyo sidii ay ciidamada ula shaqeyn lahaayeen.
Laamaha Amniga ayaa balan qaaday in aan wax doorasho ah laga qaban doonin gobalka Sanaag maalintii shalay ahayd, taas oo kaliftay in aan maanta la qaban doorashadii Somaliland.
Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ka soo jeeda gobalkaas, ayaa tagay degmada Xiingalool, wuxuuna la hadlay qaar kamid ah dadka deegaankaas.
Mr, Jibriil ayaa u sheegay dadka in looga baahan yahay ka shaqeynta Amniga & Midnimada Puntland, wuxuuna si cad u sheegay in uu fashilmay isku daygii faragalineed ee Somaliland, ku doonayso in ay ku gasho gobalka Sanaag.
Talaabadan ayaa u muuqata mid ay ku guuleystay Puntland in gobalka Sanaag laga dhigo meel ka caagan doorashada Somaliland, waxaana halkaas tagay inta badan wasiiradda, Xildhibaanada & Taliyaasha ciidamada ee ka soo jeeda oo xooga saaray sidii aysan u dhici laheyn doorashadaas.